Dhacdo naxdin leh: qoys loo dilay lacag Nus Dollar ka yar oo ay caruurtooda ku siiyeen Buskud – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Dhacdo naxdin leh: qoys loo dilay lacag Nus Dollar ka yar oo ay caruurtooda ku siiyeen Buskud
Dhacdo dad badan ka careesiisay ayaa ka dhacday degmada Mainpuri ee gobolka Uttar Pradesh ee dalka Hindiya, kadib markii nin dukaanle ah uu lacag dhan Nus Dollar u dilay lamaane is qabay.
Nin iyo xaaskiisa oo kasoo jeeda Qoymiyada tabarta yar ee Dalit ayaa la dilay kadib muran ka dhashay lacag dhan 15 rupees oo u dhiganta nus dollar ay buskud kaga deensadeen dukaan ku yaalay xaafadooda.
Ashok Mishra oo ahaa Ninka dukaanka lahaa ayaa Qoyskan deemiyay sadex buskud ay caruurtooda u geeyeen, waxa uuna ninkan ka dalbaday lamaanahan in lacagtiisa deg deg u siiyaan, hasa ahaatee lamaanaha ayaa ka codsaday in waqti yar siiyo ayna lacagta bixinayaan marka shaqo xoogsi ah kasoo laabtaan.
Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Hindiya ee Press Trust , ninka dukaanlaha oo ka carooday in aan deg deg loo siin lacagiisa ayaa gurigiisa kasoo qaatay faas waxa uuna halkaasi ku dilay lamaanihii uu ku lahaa lacagta aadka u yar.
Ciidamada booliiska ayaa xabsiga dhigay ninka gacan ku dhiigalaha ee dilay lamaanaha uu deynta ku lahaa, waxaana dilka lamaanahan ka dhashay banaanbaxyo caro wata ay dhigayeen dadka ku dhaqan degmada uu falkan ka dhacay.
Qoymiyada ay kasoo jeedaan lamaanahan ee Dalits ayaa gudaha dalka Hindiya looga yaqaanaa lama taabtaan, waxaana qoymiyad dadkeeda badankooda ay yihiin kuwa faqri ah oon heesan hanti , waxa ayna bulshada Hindiya kaga jiraan dabaqada ugu hooseesa.
Previous: Wasiiro lagu eedeeyay musuq lagu sameeyay Raashiin loogu talagalay Shacabka Gedo
Next: Dekedda Muqdisho oo uu ku soo Xirtay Markab sida Deeq Raashin ah